Ozempic vs. Trulicity: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao - Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
News Fahasalamana Fiaraha-Monina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Mpanao Gazety Fialam-Boly Lalao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Orinasa, The Checkout Fiaraha-Monina, Fahasalamana Pets Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Ny Fizahana Orinasa, Vaovao
Tena >> Zava-Mahadomelina Vs. Namana >> Ozempic vs. Trulicity: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ozempic vs. Trulicity: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Topimaso ny zava-mahadomelina sy ny fahasamihafana lehibe | Fitsaboana voatsabo | fahombiazan'ny | Fiantohana fiantohana sy fampitahana ny vidiny | Voka-dratsy | Fifandraisana rongony | FAMPITANDREMANA | FAQ
Raha voan'ny diabeta Type 2 ianao, dia mety efa nilaza ny fitsaboana endocrinologist anao na ny mpitsabo anao voalohany amin'ny fampiasana fanafody tsindrona hifehezana ny siramamy ao amin'ny ranao. Ozempic (semaglutide) sy Trulicity (dulaglutide) dia fanafody roa azo tsindrona anarana ampiasaina amin'ny fitsaboana diabeta karazana 2. Ozempic dia nataon'i Novo Nordisk, ary ny Trulicity dia nataon'i Eli Lilly sy Company. Ireo fanafody roa ireo dia nankatoavin'ny FDA. Izy ireo dia voasokajy ao amin'ny vondrona fanafody antsoina hoe agonista reseptorina GLP-1 (agonista peptide peptide).
Ozempika sy Trulicity dia fanafody diabeta tsindrona - saingy tsia insuline . Izy ireo dia miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana ny tsimokaretina insuline sy ny fampidinana ny tsiranoka glukagon, amin'izay hampihena ny haavon'ny glucose ao anaty ra. Ireo fanafody ireo dia mampihemotra ihany koa ny fandosiran'ny vavonin-tsavony, izay manampy amin'ny fanaraha-maso ny fahazotoan-komana sy ny postprandial (aorian'ny sakafo) ny haavon'ny siramamy ao anaty. Manampy amin'ny fihenan-danja izy ireo amin'ny fanampiana mampihena ny lanjan'ny vatana.
Ozempic sy Trulicity koa dia manampy amin'ny fihenan'ny hemoglobin A1c (HbA1c), izay refin'ny fifehezana glucose amin'ny fotoana. Na dia agonista GLP-1 aza ireo fanafody roa ireo, dia misy fahasamihafana vitsivitsy, izay hodinihintsika etsy ambany.
Inona avy ireo fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Ozempic sy Trulicity?
Ozempic sy Trulicity dia ao amin'ny sokajy zava-mahadomelina antsoina hoe agonista GLP-1, na agonista peptide toy ny glukagon. Ireo fanafody roa ireo dia tsy misy amin'ny anaran'ny marika ihany. Ny akora ilaina ao Ozempic dia semaglutide, ary ny akora mavitrika ao amin'ny Trulicity dia dulaglutide. Na izany aza, na ny fanafody dia tsy misy amin'ny endrika mahazatra. Ireo fanafody roa ireo dia misy amin'ny endrika tsindrona penina. Isaky ny fatra isan-kerinandro, ny fanafody dia atsofoka amin'ny alàlan'ny kibo, ny feny, na ny sandry ambony.
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Ozempic sy Trulicity
Kilasy zava-mahadomelina Ny agonista mpandray peptide 1 (GLP-1) toy ny glukagon Ny agonista mpandray peptide 1 (GLP-1) toy ny glukagon
Brand / status generic Marika Marika
Iza no anarana mahazatra? Semaglutide Dulaglutide
Inona avy ireo endrika miditra amin'ny zava-mahadomelina? Tsindrona penina amin'ny tsindrona subkutanezy Tsindrona penina amin'ny tsindrona subkutanezy
Inona ny fatra mahazatra? Doka fanombohana: 0,25 mg indray mandeha isan-kerinandro.
Aorian'ny 4 herinandro, ampio ny fatra hatramin'ny 0,5 mg indray mandeha isan-kerinandro.
Mety hitombo hatramin'ny 1 mg indray mandeha isan-kerinandro aorian'ny 4 herinandro raha ilaina ny fanaraha-maso glycemika fanampiny.
Ny fatra atoro indrindra dia 1 mg isan-kerinandro Doka fanombohana: 0,75 mg indray mandeha isan-kerinandro.
Mety hitombo hatramin'ny 1,5 mg indray mandeha isan-kerinandro raha ilaina ny fanaraha-maso glycemika fanampiny.
Ny fatra avo lenta indrindra dia 1,5 mg indray mandeha isan-kerinandro
Mandra-pahoviana ilay fitsaboana mahazatra? miovaova arakaraka ny miovaova arakaraka ny
Iza matetika no mampiasa ny fanafody? Olon-dehibe 18 taona no ho miakatra Olon-dehibe 18 taona no ho miakatra
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Trulicity?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Trulicity ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Makà fanairana momba ny vidiny
Toe-javatra tsaboin'ny Ozempic sy Trulicity
Samy manana famantarana roa ny Ozempic sy Trulicity. Ny famantarana voalohany dia ny fanatsarana ny fanaraha-maso glycemika amin'ny olon-dehibe voan'ny diabeta Type 2 (miaraka amin'ny sakafo sy fanatanjahan-tena). Ny famantarana faharoa dia ny fampidinana ny loza mety hitranga amin'ny fo lehibe (tapaka lalan-dra, aretim-po, fahafatesan'ny kardia) amin'ireo marary izay voan'ny diabeta Type 2 sy aretim-po.
toe-javatra Ozempic Trinite
Manaraka amin'ny sakafo sy fanatanjahan-tena hanatsarana ny fanaraha-maso glycemika amin'ny olon-dehibe voan'ny diabeta mellitus (DM) Type 2 ENY ENY
Mba hampihenana ny loza ateraky ny trangam-pihetseham-po mahatsiravina amin'ny olon-dehibe manana DM Type 2 sy aretim-po ENY ENY
Mahomby kokoa ve ny Ozempika na Trulicity?
Ao amin'ny dingana 3b fitsarana ara-pitsaboana , antsoina hoe SUSTAIN 7, mampitaha ny Ozempic amin'ny Trulicity, hita fa somary tsara kokoa i Ozempic raha ny amin'ny fanatsarana ny fifehezana siramamy ao amin'ny rà ary miteraka fihenan-danja, miaraka amin'ny mombamomba azy. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa Novo Nordisk, mpanamboatra Ozempic, no nanao ny fandinihana. Tsy nisy fanadihadiana an-doha hafa natao tamin'ny fampitahana ny Ozempic tamin'ny Trulicity.
Ny fanafody mahomby indrindra ho anao dia voafaritry ny endocrinologist anao na ny mpitsabo anao voalohany, izay afaka manadihady ny toe-pahasalamanao sy ny tantaram-pitsaboana, miaraka amin'ireo fanafody hafa raisinao.
Fampitahana sy fampitahana ny vidin'ny Ozempic vs. Trulicity
Samy Ozempic sy Trulicity dia rakotry ny fiantohana sy drafitra Medicare Part D. Zahao amin'ny mpamatsy fiantohana misy anao ny antsipiriany / vidiny manokana momba ny drafitrao.
Ny famaritana Ozempic dia $ 970 eo ho eo. Azonao atao ny mividy azy amin'ny $ 711 amin'ny tapakila fihenam-bidy SingleCare Ozempic.
Ny famandrihana ho an'ny Trulicity dia afaka mitentina $ 2000. Afaka mihary amin'ny SingleCare ianao ary mandoa $ 1.432 amin'ny fivarotam-panafody mandray anjara.
Voasaron'ny fiantohana mahazatra? Eny (matetika) Eny (matetika)
Voasaron'ny Medicare Fizarana D? Eny (matetika) Eny (matetika)
Fatra mahazatra Penina 1 mialoha (manome 0,25 mg, 0,5 mg, na 1 mg isaky ny tsindrona) 1 boaty 4, penina fatra tokana (0,75 mg na 1,5 mg isaky ny tsindrona 0,5 ml)
Medicare Part D copay mahazatra $ 25- $ 888 $ 25- $ 873
Sarany SingleCare $ 711 1,432 $
Ny voka-dratsin'ny Ozempic vs. Trulicity
Ny voka-dratsin'ny Ozempic izay mahazatra indrindra dia ny fisaleboleboana, fandoavana, fivalanana, fanaintainan'ny kibo ary fitohanana. Ny voka-dratsin'ny Trulicity mahazatra indrindra dia ny fisaleboleboana, fandoavana, fivalanana, fanaintainan'ny kibo, fitohanana, fihenan'ny fahazotoan-komana, havizanana ary tsy fahatomombanana Ny hypoglycemia (siramamy ambany) dia mety hitranga miaraka amin'ireo fanafody roa. Tsy lisitra feno ny vokatra hafa io. Ny voka-dratsy hafa dia mety hitranga. Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha mila lisitr'ireo vokatra hafa.
Vokany Azo ampiharina? hatetika Azo ampiharina? hatetika
maloiloy ENY 15.8-20.3% * ENY 12.4-21.1% *
Mandroa ENY 5.0-9.2% ENY 6.0-12.7%
aretim-pivalanana ENY 8.5-8.8% ENY 8.9-12.6%
Fanaintainan'ny kibo ENY 5.7-7.3% ENY 6.5-9.4%
fitohanana ENY 3.1-5.0% ENY 3.7-3.9%
Hypoglycemia (siramamy ambany) ENY miovaova arakaraka ny ENY miovaova arakaraka ny
Mihena ny filan-dratsy ENY % tsy notaterina ENY 4.9-8.6%
havizanana ENY > 0.4% ENY 4.2-5.6%
Dyspepsia (tsy fihinanan-kanina) ENY 2.7-3.5% ENY 4.1-5.8%
* Miankina amin'ny fatra
Loharano: DailyMed ( Ozempic ), DailyMed ( Trinite ).
Fifandraisana zava-mahadomelina an'ny Ozempic vs. Trulicity
Ny fampiasana Ozempic na Trulicity miaraka amin'ny insulaga na insuline secretagogues (fanafody diabeta am-bava sasany) dia mety hampitombo ny risika hypoglycemia. Raha mihinana an'io fitambarana fanafody io ianao dia mety hanitsy ny fatran'ny insuline na fanafody am-bava anao ny prescriberanao. Ary koa, satria ny Ozempic na Trulicity dia miteraka fahatarana ny famoahana ny vavony, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fihinanana fanafody am-bava raha raisina miaraka. Amin'ny fanadihadiana, ireo fifandraisana ireo dia tsy niseho tamin'ny diplaoma mifandraika amin'ny klinika; na izany aza, hevitra tsara ny manatona ny mpitsabo anao momba ny fotoanan'ny fanafody.
Ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny index therapeutika tery dia tokony harahi-maso manokana. Anisan'izany ireo zava-mahadomelina izay misy varavarankely kely eo anelanelan'ny vokatra fitsaboana sy ny poizina toy ny Coumadin (warfarin), Lanoxin (digoxin), ary ny fanafody fanintona.
Tsy lisitra feno amin'ny fifanakalozana zava-mahadomelina izany. Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha mila lisitra feno momba ny fifamoivoizana.
RONGONY Kilasy zava-mahadomelina Ozempic Trinite
(glimepiride, glipizide, glyburide) Insulin secretagogues ENY ENY
Tresiba insuline ENY ENY
Fanafody am-bava Fanafody am-bava Eny (mety) Eny (mety)
Fampitandremana momba ny Ozempika sy ny fahantrana
Satria samy mitovy kilasy amin'ny zava-mahadomelina ireo fanafody roa ireo, dia mitovy ny fampitandremana sy ny fitandremana. Handray torolàlana momba ny fanafody ianao isaky ny mameno fanafody amin'ny Ozempic na Trulicity, izay mamaky ny voka-dratsy sy fampitandremana.
Misy fampitandremana anaty boaty ho an'ny Ozempic sy Trulicity, izay fampitandremana matotra takian'ny FDA. Ao amin'ny biby mpikiky, Ozempic na Trulicity dia miteraka fivontosan'ny sela tiroida C, ao anatin'izany ny MTC (carulloma tiroidan'ny tiroida). Tsy fantatra na olombelona no nahatonga an'io. Ary koa, ny marary manana tantaram-pianakaviana (na tantaram-pianakaviana) an'ny MTC na misy mararin'ny neoplasia endocrine karazana 2 (MEN 2) dia tsy tokony hihinana Ozempic na Trulicity.
Ny fampitandremana hafa dia misy:
Ny pancreatitis maranitra dia mety hitranga. Ny marary dia tokony hojerena tsara amin'ny famantarana sy soritr'aretin'ny pancreatitis, ao anatin'izany ny fanaintainan'ny kibo mafy maharitra, izay mety hiposaka any an-damosina, ary mety miaraka na mety tsy miaraka amin'ny fandoavana. Raha ahiahiana ny pancreatitis dia tokony hatsahatra ny fitsaboana Ozempic na Trulicity ary tokony hatomboka ny fitantanana sahaza. Raha voamarina ny pancreatitis dia tsy tokony haverina ny fanafody.
Mety hitranga ny fahasarotana amin'ny retinopathie diabeta - avo kokoa ny risika amin'ireo marary manana retinopathie diabeta. Ny fanatsarana haingana ny fifehezana siramamy ao anaty dia mety hampifandraisina amin'ny fihomboana vetivety amin'ny retinopathie diabeta. Tokony harahi-maso ny marary.
Ny penina Ozempika na Trulicity dia tsy tokony zaraina eo anelanelan'ny marary mihitsy, na dia ovaina aza ny fanjaitra, noho ny fitomboan'ny risika amin'ny famindrana ireo otrikaretina azo avy amin'ny ra. Taratasy tokana-penina ny penina triticity - isaky ny indray mandeha ny pen Trulicity.
Ny siramamy amin'ny rà ambany dia mety hitranga rehefa raisina amin'ny alikaola na alim-panafody insulikanika ny Ozempic na Trulicity. Mety ilaina ny fanitsiana ny insuline na ny secretagogue insuline.
Ny ratra voa voa mafy ary miharatsy ny tsy fahombiazan'ny voa maharitra dia mety hitranga, izay mety mitaky dialyse. Ny soritr'aretina dia mety misy fisaleboleboana, fandoavana, fivalanana ary / na tsy fahampiana rano. Tokony harahi-maso ny asan'ny voa.
Ny fanehoan-kevitra momba ny hypersensitivity lehibe (anaphylaxis na angioedema) dia notaterina. Raha mitranga izany dia tokony hatsahatra ny Ozempic na Trulicity. Ny marary manana fihetsika hypersensitivity teo aloha dia tsy tokony hampiasa Ozempic na Trulicity.
Noho ny loza mety hitranga amin'ny zaza ao am-bohoka, Ozempic na Trulicity amin'ny ankapobeny dia tsy tokony hampiasaina amin'ny fitondrana vohoka, raha tsy hoe misy tombony lehibe mihoatra ny risika rehetra. Ny mpitsabo anao dia mety hahita fanafody hafa azo ampiasaina.
Ankoatr'izay, ny fampahalalana momba ny mpanamboatra Trulicity dia milaza fa ny fanafody dia mety mifandraika amin'ny fihetsiky ny gastrointestinal (GI), indraindray mafy. Satria ny Trulicity dia tsy nianarana tamin'ny marary voan'ny aretina GI mafy, anisan'izany ny gastroparesis mahery, dia tsy tokony hasaina ampiasaina amin'ireo marary ireo isika.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny Ozempic vs. Trulicity
Inona ny Ozempic?
Ozempic dia fanafody tsindrona indray mandeha isan-kerinandro ampiasaina amin'ny fitsaboana diabeta Type 2. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe agonist mpandray receptor GLP-1.
Inona no atao hoe Trinite?
Ny trulicity dia tsindrona indray mandeha isan-kerinandro ampiasaina amin'ny fitsaboana diabeta Type 2. Agonista mpandray ny GLP-1 izy io.
Mitovy ve ny Ozempic sy Trulicity?
Ozempic sy Trulicity dia samy ao amin'ny kilasin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe agonista mpandray ny GLP-1. Tena mitovy izy ireo, saingy tsy mitovy. Ny fampahalalana etsy ambony dia mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fanafody tsirairay. Ny zava-mahadomelina hafa ao amin'ny kilasy agonista mpandray ny GLP-1 dia misy an'i Victoza (liraglutide), Byetta (exenatide), Bydureon (exenatide maharitra), ary Adlyxin (lixisenatide). Misy koa takelaka semaglutide am-bava azo alaina, miaraka amin'ny akora mitovy ao amin'ny Ozempic. Ny takelaka am-bava dia antsoina hoe Rybelsus.
Tsara kokoa ve ny Ozempika na Trulicity?
Ireo zava-mahadomelina roa ireo dia toa mitovy amin'ny fahombiazany amin'ny fanatratrarana ny fifehezana glycemika sy ny fanampiana mampihena ny lanjany. Ny fandinihana iray (jereo etsy ambony) dia nampitaha ireo zava-mahadomelina roa ary nahita fa tsara kokoa ny Ozempic. Fa zava-dehibe ny manamarika fa ny fanadihadiana dia nataon'ny mpanamboatra Ozempic. Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha toa ka mety ho fanafody mety aminao ny Ozempic na Trulicity.
Afaka mampiasa Ozempic na Trulicity ve aho mandritra ny fitondrana vohoka?
Misy ny angona voafetra momba ny Ozempic sy Trulicity amin'ny fitondrana vohoka. Mety hiteraka fahavoazana eo amin'ny foetus izy ireo. Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha mila fitarihana ianao. Raha efa mandray Ozempic na Trulicity ianao ary fantaro fa bevohoka ianao dia mifandraisa amin'ny OB-GYN anao avy hatrany hahazoana tari-dalana.
Afaka mampiasa Ozempic na Trulicity amin'ny alikaola ve aho?
Ny tsara indrindra dia ny misoroka ny alikaola raha mampiasa Ozempic na Trulicity. Ny alikaola dia mety miteraka siramamy ambany, ary ny Ozempic na ny Trulicity kosa dia mety miteraka siramamy ambany ihany koa. Ny fitambarana dia mety hiteraka siramamy ambany na maharitra.
Mitovy amin'ny metformin ve ny Ozempic?
Tsia. Ny tsindrona Ozempika na ny fanafody am-bava metformin dia azo ampiasaina miaraka amin'ny insuline sy / na fanafody am-bava hafa, ary koa ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena, amin'ny fitsaboana diabeta Type 2. (Ny Ozempic dia tsy voalaza amin'ny fitsaboana diabeta Type 1 na amin'ny fitsaboana ketoacidosis diabeta).
Maharitra hafiriana ny Ozempic vao manomboka miasa?
Vantany vao mitsindroka Ozempic ianao, dia tonga ao anatin'ny iray ka hatramin'ny telo andro ny haavon'ny ambony indrindra. Na izany aza, mety maharitra kokoa ny fahitana ny vokany. Ny fatra mahazatra indrindra dia ny manomboka amin'ny 0,25 mg indray mandeha isan-kerinandro ary aorian'ny efa-bolana dia hampitomboinao ny 0,5 mg indray mandeha isan-kerinandro. Raha aorian'ny efatra herinandro fanampiny dia mila fifehezana bebe kokoa ianao, hitombo ho 1 mg indray mandeha isan-kerinandro. Ny mpitsabo anao dia hitarika anao amin'ny fatra mety.
Miteraka fitaintainanana ve ny Ozempic?
The Ozempic fampahalalana momba ny mpanamboatra tsy manisy lisitra ny tebiteby ho voka-dratsy. Na izany aza, ny Ozempic dia mety miteraka hypoglycemia (siramamy ambany), ary ny tebiteby dia mety ho iray amin'ireo famantarana ny siramamy ambany. Raha ao Ozempic ianao ary manana fanahiana mbola tsy niainanao taloha dia manatona ny mpitsabo anao.
Afaka mampiasa inhaler lany daty ve ianao?
Ny sakafo 3 tsara indrindra ho an'ny IBS — sy ny sakafo 9 tokony hialana
Torolàlana momba ny dosie Tylenol an'ny zazakely: Impiry aho no afaka manome an'i Tylenol zanako?
Torohevitra 5 miverina an-tsekoly ho an'ny taom-pianarana mahasalama
Rahoviana no manahy ny hatsembohana amin'ny alina
Antontan'isa fitaintainanana 2021
Mitadiava fanafody mangatsiaka tsara indrindra mifototra amin'ny soritr'aretinao
Hanonitra ahy amin'ny SingleCare ve ny fiantohana ataoko?
Estrace vs. Premarin: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
The Master Cleanse Diet: Zava-misy haingana 5 tokony ho fantatrao
Torohevitra 5 momba ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny zava-mahadomelina
Azo antoka ve ny mihinana fanafody fanoherana ny tebiteby amin'ny alikaola?
hampihena ny tosidranao ve ny vinaingitra paoma?
inona no fanafody kohaka otc tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe
hafiriana aho no afaka maka drafitra b
mampihena lanja anao ve ny vovoka varahina?
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao
Orinasa, The Checkout
Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao
Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina